Akwụkwọ nke Jayraj Shetty na Martech Zone |
Edemede site na Jayraj Shetty
Jayraj bụ onye edemede ọdịnaya nke ihe mgbaru ọsọ ya na ndụ bụ polymath. Ọ kabeghị ebe ahụ mana ọchịchọ ya enyela ya ọtụtụ ihe ọmụma banyere ọtụtụ ihe. Ọ na-agba mbọ ịkọ ihe ọmụma ya site na ịde ederede. N'oge ya na-enweghị ọrụ, ọ na-aga Intanet, na-aga ije dị anya, na-agbalịkwa ime mfegharị. Ọ hụrụ ịhụnanya n'anya dị ka Terry hụrụ ịhụnanya n'anya!
Appy Pie App Builder: Onye Enyi-Enyi na Enyi, Koodu App Building Platform
Fraịde, Machị 27, 2020 Fraịde, Machị 27, 2020 Jayraj Shetty
Mmepe Ngwa bụ ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe. Site na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-azọ maka ọnụnọ n'ịntanetị, ụlọ ọrụ ndị na-emepe ngwa na-arụ ọrụ maka ha. Enweela ịrị elu na-aga n'ihu na ngwa maka ngwa ndị mepụtara ahịa na-emetụta ndị mmepe dị adị. Na mgbakwunye, ọ bụ ụlọ ọrụ na-enwe nsogbu ịrị elu na ịrị elu na-achọ. E wezụga nke ahụ, ngwa ndị dị ugbu a chọrọ mmezi oge niile. Nnyocha na-egosi na ejiri 65% nke ihe onwunwe na-anwa iji nọgide na-adị